Izinhlobo, Izinsizakusebenza, Nezisombululo Zokutholwa Kokukhwabanisa Kwesikhangiso Martech Zone
ULwesibili, April 11, 2017 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2021 Douglas Karr
Ocwaningweni olwenziwe yi Inhlangano Yabakhangisi Kazwelonke (ANA) kanye ne- I-White Ops, ucwaningo lwabikezela ukuthi inkohliso yezikhangiso yabiza abakhangisi u- $ 7.2 billion ngonyaka odlule. Futhi kunhlolovo yezikhangiso zokubonisa zedijithali zase-US, I-Integral Ad Science ikhombe u-8.3% wazo zonke izikhangiso njengezinkohliso, uma kuqhathaniswa no-2.4% wezikhangiso ezithengiswe ngqo ngabashicileli. Qinisekisa kabili ibika ukuthi ngaphezu kwe-50% yezikhangiso zedijithali azikaze zibonwe.
Yiziphi Izinhlobo Zokukhwabanisa Kwesikhangiso?
Impression (CPM) yesikhangiso - abakhohlisi bafihla izikhangiso ngephikseli elingu-1 × 1 noma bafaka izikhangiso ngaphezulu komunye nomunye ukuze baphindaphinde okuvelayo okubonwa yisikhangiso kusayithi.
Sesha (CPC) Isikhangiso - abakhohlisi bakha amawebhusayithi mbumbulu, kwesinye isikhathi azenzekelayo, asebenzisa amagama asemqoka abiza kakhulu ngokuchofoza kokunye ukushayela izikhangiso ezibiza kakhulu kumasayithi abo.
Inhlanganisela (CPA) Yesikhangiso (AKA Cookie Stuffing) - amasayithi avame ukukhokhwa ngabasebenzisi abenza isenzo, ngakho-ke abakhohlisi benza uhlelo olungelona iqiniso ukuze bakhohlise uhlelo lwesikhangiso bakholelwe ukuthi kukhona okwenziwayo.
Inkohliso Yesikhangiso Yomholi (CPL) (i-AKA Conversion Fraud) - bakholwe noma cha, abakhohlisi empeleni bangakhokhela abasebenzisi imali encane yokugcwalisa amafomu kunaleyo abayenzayo uma bekhokhelwa ukuguqulwa… okuholele emikhondweni engeyona eyenzuzo.
Injection ye-Ad kanye ne-AdWare Fraud - abakhohlisi basebenzisa amabha wamathuluzi noma i-malware ukufaka izikhangiso kwisipiliyoni sokuphequlula sabasebenzisi bangempela, bakhiqize ukuvela okuningi kwesikhangiso namazinga aphezulu wokuchofoza.
Ukwehliswa Kwesizinda noma Ukukhwabanisa Kwe-Ad Impression Ad - abakhohlisi baguqula ngokuhlelekile ama-URL amasayithi ukwenza abakhangisi bacabange ukuthi amanga noma ukuphanga noma amasayithi e-porn yizindawo zabashicileli abahlonishwayo.
Ukukhwabanisa kwe-CMS - abakhohlisi bayagenca noma babeke uhlelo olungayilungele ikhompuyutha ohlelweni lokuphathwa kokuqukethwe komshicileli oludala amakhasi abo besebenzisa izizinda ezisemthethweni ngokuphelele.
Ukuphinda Ukhombe Inkohliso - Ama-bots alingisa izivakashi zangempela futhi adala okuvelayo nokuchofoza kumikhankaso yokuhlela kabusha eqhutshwa.
Ukukhwabanisa Kwethrafikhi noma Ukukhwabanisa Kwezithameli - abashicileli bathenga ithrafikhi enezigaba eziphakeme ukufaka inani lemibono edingekayo ukufeza umkhankaso wokukhangisa.
Uma ungathanda ukufunda mayelana nalezi zinhlobo zokukhwabanisa kwezikhangiso ngokuningiliziwe, bheka i-athikili kaJohn Wilpers, Yiziphi izinhlobo eziyisishiyagalolunye zokukhwabanisa kwezikhangiso zedijithali?
Izixazululo Zokukhwabanisa Kwezikhangiso:
Izinkampani ezintathu okukhulunywe ngazo ngenhla nazo zingabaholi esikhaleni sezixazululo ze-Ad Fraud.
I-Integral Ad Science - ivunyelwe yi Umkhandlu Wokulinganiswa KwemidiyaIzixazululo ze-Integral Ad Science zimboza iwebhu yeselula, izikhangiso ezingaphakathi nohlelo zeselula, ideskithophu, isibonisi nokutholwa kwenkohliso yesikhangiso sevidiyo. Ubuchwepheshe babo bokuphatha nokwenza kahle kukunikeza izindlela zokunciphisa imfucuza kuhlelo lwakho lwemidiya ngokuvimba izikhangiso ukuthi zingake zanikezwa emakhasini e-web anenkohliso nokumisa amabhidi kokuvela komgunyathi ngesikhathi sangempela.
I-DoubleVerify Pinnacle - Ihlola ikhwalithi yombono ngamunye olethwe kanye nomphumela ophelele wesilinganiso ngasinye sekhwalithi. Ipulatifomu ibuye yenze lula izinqumo zokwenza kahle ngokunikeza ukuhlaziywa okujulile nokubona ngesikhathi sangempela sokushayela ikhwalithi yakho yokubonisa.
I-WhiteOps FraudSensor neMediaGuard - I-FraudSensor ihlaziya wonke amapulatifomu iphinde ihlole amasiginali wesiphequluli ayi-1,000 +. Kuvunyelwe ngu MRC ukuthola ukutholwa kwethrafikhi okungavumelekile (SIVT). IMediaGuard MediaGuard iyi- API Isixazululo esihlola zonke izicelo zebhidi noma ukuvela kwesikhangiso kuma-millisecond futhi sinikeze uhlelo lwangaphambi kokubhida oluvimbela ukuzivikela ekuthengweni okukhohlisayo.
Mayelana noMkhandlu Wokulinganiswa Kwemidiya
I-MRC yinhlangano yezimboni engenzi nzuzo eyasungulwa ngo-1963 enezinkampani ezihola phambili zethelevishini, zomsakazo, zokuphrinta neze-Inthanethi, kanye nabakhangisi, ama-ejensi wokukhangisa kanye nezinhlangano zezohwebo inhloso yazo ukuqinisekisa ukuthi izinsizakalo zokulinganisa zisebenza, zithembekile futhi zisebenza kahle.
Tags: ukukhwabanisa kwezikhangisoumjovo wesikhangisoukukhwabanisa kwe-adwareukukhwabanisa kwesikhangiso esihambisanayoukukhwabanisa kwesikhangisoukukhwabanisa kwezithameliukukhwabanisa kwama-cmsinkohliso yokuguqulwaukugxusha ikhukhiukukhwabanisa kwesikhangiso se-cpacpc ukukhangisacpl ukukhwabanisacpm ukukhwabanisa kwezikhangisoukukhishwa kwesizindafakaza kabilidvdv phezuluukukhangisa kwesikhangisoisayensi yezikhangiso ebalulekilejohn wilpersukukhwabanisa okukhangisiwe okukhangisiweukuhola ukukhwabanisa kwezikhangisoukukhomba kabusha ukukhwabanisaukubuyisela emuva ukukhwabanisasesha ukukhwabanisa kwezikhangisoukukhwabanisa kwezimotoi-whiteops